कहाँ के गर्दैछन बालक सलिम धिमाल ? - Purbeli News
कहाँ के गर्दैछन बालक सलिम धिमाल ?
अहिले कहाँ छन् उनी, के छ उनको अबस्था ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ३०, २०७४ समय: ७:१६:४२
बेलबारी । करिब १ बर्षअघि ब्रेन टयुमरका कारण एउटा निर्दोष १२ बर्षीय बालकले आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर मृत्यु कुरिरहेको समाचार पहिलोपटक प्रकाशन र प्रसारण गर्दा स्वभाविकै रुपमा मेरा पनि आँखा रसाएका थिए । मोरङको बेलबारी २ स्थित शिक्षा सन्देश इँग्लिस स्कुलमा अध्यायनरत स्थानीय सलिम धिमाल परिवारको कमजोर आर्थिक अबस्थाका कारण उपचारको अभावमा छटपटाईरहेका थिए । उनको उपचारका लागी परिवारले भएको जायजेथा बिक्री गरिसकेको थियो । तर् उनको उपचार सम्भव थिएन । ति अवोध बालकका हजारौँ सपनाहरु थिए ,उनी बाँच्न,हाँस्न,खेल्न अनि आफना सहकर्मीहरुसागै बिद्यालय जान र अध्यायन गरेर ठुलो मान्छे बन्न चहान्थे । जुन सपना पुरा गर्नका लागी उनी स्वस्थ्य हुनु जरुरी थियो । बिचरा ति अबोध बालकलाई के थाहा आफुलाई के रोग लागेको हो । उनी त चहान्छन आफनो रोग चाँडो निको होस अनि पुरानै दैनिकीमा फर्कन सकुुँ ।
कुन चाँहि अभिभावकले नचाहला र आफनो सन्तान,स्वस्थ्य र सुखी भएको देख्ने । आफना सन्तानमाथि परिवारको ठुलो सपना हुन्छ । ती बालकको परिवारले पनि त्यस्तै चहान्थ्यो । तर सबै कुराहरु सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ? कलिलो उमेरमा रोगले सताएपछि उनी थलिए,उनको उपचारका लागी प्रयास गर्दा पनि असम्भव भएपछि परिवारले सार्बजनिक रुपमा उनको जिवन बचाउन अपिल गरेको थियो ।
अहिले कहाँ छन उनी, उनको अबस्था के छ ?
उनको उपचारका लागी परिवारले सकेसम्म गर्यो । आफु सँग भएको सारा सम्पत्ति खर्च भयो । उनको उपचारका लागी परिवारले १० लाख जति खर्च गर्यो, तर उनको उपचार त्यति खर्चले मात्र सम्भब भएन । उनको उपचारका लागी १० लाख भारुको आबश्यत्ता थियो । तर उनको परिवार सँग त्यति खर्च जुटाउने हैसियत थिएन । त्यसैले उनीहरु सहयोगी मन भएकाहरु सँग उपचार खर्चका लागी बिन्ति गरे,स्थानीय लालभित्ति युवा समुहको पहलमा उनको उपचारका लागी देश तथा बिदेशबाट लाखौँ रकम जुट्यो,सोही कारण उनी अहिले भारतमा उपचाररत रहेका छन,उनको स्वास्थ्य पनि सुध्रिएको छ । केही समयपछि उनी नेपाल फर्किने तयारीमा रहेका छन ।
ब्रेन टयूमरका कारण उनी लामो समयदेखि अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन । उनको उपचारमा २० लाख बढी भारु ख्र्च भईसककेको छ । सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनको उपचार खर्च जुटाउनु परिवारका लागी निक्कै ठुलो चुनौति भएको थियो । तरपनि सहयोगी मन र भावाना भएका दाताहरुको सहयोगमा उनले नयाँ जिवन पाएका छन । बिहिबार उनकी आमा सँगको छोटो टेलिफोन कुराकानीमा उनले सलिम स्वस्थ्य हुँदै गरेको र उनले नयाँ जिवन पाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन । उनले पुर्ण स्वस्थ भएर फेरी हाँस्नेछन अनि रमाउनेछन । सलिमले फेरी नयाँ जीवन पाएका छन । उनको सुस्वास्थ्य र दिर्घायुको कामना ।